Cheap Flexible Large Angle Vertical Sidewall Rubber Fatịlaịza Fatịlaị Bịbatara na Factlọ Ọrụ | YiZheng
Nnukwu Angle Vertical Sidewall na-ebufe ihe a na-akpọkwa nnukwu ihe eji ebu belt) nke nwere nnukwu njem. Ya mere, na ọ bụ ezigbo ngwá maka iru nnukwu n'akuku erute. A nabatara ya nke ọma na oru nzuzo.
Gịnị bụ Large Angle Vertical Sidewall Belt Conveyor eji?
Nke a Nnukwu Angle Chọrọ Eriri ebu dị mma nke ọma maka mbadamba ngwaahịa na-enweghị mmiri na nri, ọrụ ugbo, ọgwụ, ihe ịchọ mma, ụlọ ọrụ kemịkalụ, dịka nri nri, nri oyi, akwụkwọ nri, mkpụrụ osisi, confectionary, chemicals na granulu ndị ọzọ.
Na eriri mmepụta fatịlaịza, Nnukwu Angle Chọrọ Eriri ebu enwere ike iji ya dị ka akụrụngwa njem iji jikọọ usoro dị iche iche, a na-ahọrọkarị ya na njedebe nke ohere na saịtị mmepụta, ụdị ebu a nwere usoro kọmpụta iji mee ka ịdị elu na ikike njem.
Ahaziri Service maka Large n'akuku Vetikal Sidewall echebe echebe
1) Nye ọrụ OEM
2) 20 afọ nke ahụmahụ
3) Anyị nwere ike ịmepụta ma mepụta ebu ahụ dabere na mkpa gị pụrụ iche.
4) Ọnụ ala dị ọnụ ala na akụkụ ahụ mapụtara.
Akụkụ nke Nnukwu Ogwe Akụkụ Na-ebu Nnukwu Akụ
1. Ọnụ mmezi dị ala.
2. Nnukwu ikike ibufe, ma ọ nwere ike izere ihe na-awụfu ngwa ngwa.
3. belt ahụ nwere ike ịkwado ịgbanye site na ntanetị gaa na mbugharị ntụgharị.
4. Ọ na-azọpụta a otutu ohere dị ka ọ na-enye ohere ihe erute na 0-90 ogo.
Nnukwu Ogwe Igwe Akụkụ Na-ebu Akụ Na-ebu Video Ngosipụta
Nnukwu Nhọrọ wkwụ Akụkụ Ntanetị Nnukwu Nhọrọ
Na Nnukwu Angle Vertical Sidewall na-ebufe ihe enwere ike kewaa n'ime T, C na TC dịka akụkụ ha dị iche iche.
•Tdị T dị mma maka ọchịchọ -40 Celsius;
•Cdị C adabara maka ikpe nwere ezigbo mmiri mmiri dị na mmiri β> 40 Celsius;
•Dị TC kwesịrị ekwesị maka ọchịchọ β> 40 Celsius, na nnukwu viscosity nke ihe.
Nke gara aga: Portable Mobile echebe ebu
Osote: Ịwụ Igwe